merolagani - एनआईसी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड बिक्री खुल्ला, कहिलेसम्म दिने आवेदन?
एनआईसी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड बिक्री खुल्ला, कहिलेसम्म दिने आवेदन?
Nov 27, 2020 09:42 AM Merolagani
एनआईसी एशिया बैंक कोष प्रबर्द्धक रहेको एनआईसी एशिया म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने एनआईसी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्डको मंसिर १२ गते शुक्रबारदेखि बिक्री खुल्ला भएको छ।
इकाइको योजना व्यवस्थापक एनआईसी एशिया क्यापिटलले प्रति इकाई १० रुपैयाँका दरले ५ करोड बराबरको इकाई अर्थात ५० करोड रुपैयाँ बराबरको इकाई बिक्री खुल्ला गरेको हो। यसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात ७५ लाख इकाई कोष प्रबर्द्धक एनआईसी एशिया बैंकलाई सुरक्षित गरी ४ करोड २५ लाख इकाईमध्ये प्रथम चरणमा सर्वसाधारणहरुलाई एक करोड २५ लाख इकाईमा सर्बसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्।
यस खुलामुखी योजनामा छिटोमा मंसिर १६ गते सम्ममा आबेदन गरीसक्नु पर्नेछ। त्यस अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरे ढिलोमा मंसिर २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
यस योजनामा प्रति इकाई १० रुपैयाँका दरले न्यूनतम १०० इकाईका लागि र अधिकतम ५० लाख इकाई सम्म आबेदन दिन सकिनेछ।
इक्रा नेपालले योजना व्यवस्थापक एनआईसी एशिया क्यापिटललाई ुइक्राएनपी एएमसी क्वालिटी ३ु रेटिङ्ग दिएको छ। यस्तै प्रबर्द्धकलाई इक्रा नेपालले ुइक्राएनपी–बीबीबी प्लसु रेटिङ्ग दिएको छ। यसले मध्यम जोखिम रहेको जनाउछ।
Jan 27, 2021 09:31 AM
खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा बढेपनि नेपाल बैंकको नाफा सामान्य घट्यो
Jan 27, 2021 07:49 AM